Ungayikhokha kanjani imali yama-oda kuwebhusayithi yethu ngokudluliselwa kweBhange lamanye amazwe S - HGH Phuket
Ungayikhokhela kanjani i-oda kuwebhusayithi yethu ngokudluliselwa kweSWIFT kwebhange lamanye amazwe?
Kuyini ukukhokha okusheshayo? Ukulula, isivinini nokuphepha kokusetshenziswa
Ukukhokha kwe-SWIFT kungukudluliselwa kwemali okwenziwa phakathi kwamabhange nabantu nezinhlaka zomthetho ngenethiwekhi yokukhokha ye-SWIFT.
Amalungu enethiwekhi okwamanje angaphezulu kwezinhlangano eziyizinkulungwane eziyikhulu ze-10 emazweni we-210. Lokhu kukunika amandla okuthumela ngokushesha izinkokhelo zamanye amazwe ngezimali ezahlukahlukene emazweni athuthukile kakhulu.
Ungayidlulisela kanjani imali ngohlelo lwe-SWIFT online?
Amabhange amaningi ahlinzeka ngamakhono okuthumela ngokudluliselwa kwe-SWIFT ye-inthanethi kusuka kwi-akhawunti yakho yeBhange ngaphandle kokushiya ikhaya.
Ukuze uthumele imali kwelinye izwe, ngena ngemvume i-akhawunti yakho yaseBhange (i- "Internet banking", "iklayenti le-inthanethi") esigabeni sokudluliselwa kwamanye amazwe, bese ugcwalisa imininingwane edingekayo ngomamukeli, uzokwazi ukuthumela kalula imali phesheya izindleko zomemukeli.
Uma kuvela ukubonakala kwemibuzo, ungashayela iBank yakho bese uthola izeluleko ezinolwazi eziningilizayo zochwepheshe.
Ungayithumela kanjani imali ngokuqondile kwiBhange?
Noma iyiphi iBhange ezweni lakho livumela ukudlulisa i-SWIFT. Ukuvakashela ngokwakho eBhange futhi utshele inhloso yakho yokwenza umsebenzi futhi unikeze imininingwane yeBhange ngalowo owemukelayo ngqo umsebenzi weBhange. Abasebenzi basebhange bazokwenzela futhi bakuphelelisele konke, inqubo yokuthenga ngeke ithathe ngaphezu kwemizuzu ye-15.
Imiphi imininingwane edingekayo yomkhokhi wentengiselwano?
Ukudlulisa imali phesheya ikhasimende lidinga ukwazi imininingwane ephelele ye-SWIFT ngabantu abasemzimbeni noma abasemthethweni, okuzothunyelwa ukudluliselwa.
-igama leBhange lokuzuza (isibonelo I-BANGKOK BANK PUBLIC CO..LTD)
- ikhodi ohlelweni lwe-SWIFT (isibonelo BKKBTHBK )
- Inombolo ye-akhawunti yomemukeli
- Igama nesibongo salowo osemukelayo
I-SWIFT ilungele ukuthumela okudluliselwa kumacala alandelayo:
- Ukusebenza kwesibalo esikhulu phesheya ngokunciphisa imali yekhomishini.
- Ukuthengwa kwezitolo eziku-inthanethi phesheya.
- Ukukhokhwa kwemisebenzi yezinkampani zakwamanye amazwe.
- Ukudluliselwa kwesamba esikhulu semali kubantu kwezinye izinhloso.
Kodwa-ke, kufanele kuphawulwe ukuthi yonke imisebenzi eyenziwa ohlelweni lwe-SWIFT iphephile ngokuphelele.
Konke, kufaka phakathi kwezezimali, umthwalo wemfanelo wayo, uthathwa ngohlelo uqobo. Ukuhlanganiswa kwemicimbi enengqondo nengokomzimba akuvumeli noma yiziphi izinguquko zokuhamba, ngaphandle kwalokho, ukubethela okukhethekile kwenza kube nzima ukuguqula umlayezo ngesikhathi sokuhambisa kwawo nge-SWIFT.
Ngaphandle kokuthi ikhasimende nomamukeli, akekho noyedwa ongafunda okuqukethwe kwalo.
Ijubane lokudluliswa kwe-SWIFT phesheya?
Imvamisa imali ifika kumtholi ngaphakathi kwamahora we-24 (izinsuku zokusebenza). Isikhathi senqubo esiphezulu sizothatha izinsuku ze-3-5 ukuba ziku-akhawunti yokwamukela.
Ukuthola imininingwane eminingi ngokukhokha okusheshayo kwe-oda lakho kuwebhusayithi yethu, ngiyacela Xhumana nathi
Kufakwe ku: Izinkokhelo
esihlokweni esandulele I-HGH Pharmacy ePhuket - yamukela ukukhokhelwa Western Union
esihlokweni esilandelayo Ukukhokha HGH ngokubhalisa. Isebenza kanjani?